Zavatra mahagaga atao amin'ny Ice Ice - Chemistry
Zavatra mahagaga atao amin'ny gilasy maina
Fialam-boly mahaliana sy mahaliana momba ny siansa
Ny ranomandry no tena endriky ny gazy karbonika. Antsoina hoe "ranomandry maina" izy io satria mangatsiaka, nefa tsy mikoriana any anaty rano. Ny glasy maina dia manaloka na mampiakatra mivantana avy any amin'ny solika matevina ho an'ny gazy kôperativa . Raha manana vintana ianao mba hahazo ranomandry maina, dia maro ny tetikasa azonao andramana. Ireto ny sasany amin'ireo zavatra mahafinaritra tiako atao amin'ny gilasy maina.
Homamiadin'ny gidra homemade - Voalohany mila gilasy maina, noho izany raha tsy misy ianao, ataovy izany!
Fanondrahana Ice Cream - Ny tetikasa mahazatra dia ny mametraka ranomamy misy ranomandry amin'ny rano mafana , ka mahatonga azy hamokatra rahona vovoka na zavona.
Kitapo mivalona Ice Crystal - Mametraka sombin- kisoa maina ao anaty vilia iray na kaopy misy vahaolana bubble . Mandroaka tavoahangy miaraka amin'ny vahaolana bubble ary ento ao anaty molotra ny vilia baolina, mikaroka ny gazy karbonika ao anaty bozaka goavam-be izay mitovy amin'ny baolina kristaly .
Blaoginy voatsabo - Mamenoa savoka anaty savony eo ambonin'ny siny maina . Hipoitra eny amin'ny rivotra amin'ny ranomandry maina ny bala.
Ny voankazo voajanahary - Mamafaza ny akoho na voankazo hafa mampiasa gilasy maina. Ny bobongolo dioxide karbona dia lasa voafandriky ny voankazo, ka mahatonga azy hozatra sy karbona.
Singing or Spoon Screaming - Mandrobona ny zavatra metaly manohitra ny ranomailaka maina ary hiseho mihira na mitomany rehefa mibaribary.
Ice Cream Ice Cream - Afaka mampiasa gilasy maina ianao mba hahazoana maingoka maimaim-poana . Satria navotsotry ny gazy karbônika karbona ny glasy vokatra dia mavesatra sy karbônina, toy ny ranomandry mafana.
Fitaovam-pitaterana ranomandry - Mametraka sombin-kisoa maina amin'ny vahaolana bubble. Hamboly ranom-borona manjelanjelatra. Manipika azy ireo mamoaka oram- bozaka maina , izay vokatra mahafinaritra.
Manaova Kometina - Simularà ketsa iray mampiasa gilasy maina ary fitaovana tsotra vitsivitsy. Hiteraka "tail" tahaka ny tena ketsa mihitsy aza izany.
Dry Ice Jack-o'-Lantern - Manaova hafanana Halloween jack-o'-lanterna izay mandona ranonoram-bozaka maina.
Fanondrahana volokano volontsôkôla - Raha tsy afaka misakafo ianao, dia azonao ampiasaina izany ho toy ny fanokanana sakafo. Ao anatin'ity tetikasa ity, ny gilasy maina dia mamoaka volkano volkano ho an'ny mofomamy volkano .
Bola Ice Dry - Manamaivana ny ranomandry maina ao anaty fitoerany izany. Ny dikan-teny azo antoka indrindra dia ny mametraka sombin-kisoa maina ho lasa plastika amin'ny plastika plastika na potato potato potika amin'ny bokotra pop.
Asio balaonina iray - Asio gilasy maina ao anaty baolina iray. Rehefa mibaribary ny gorodin'ny maina dia mitsoka ilay baolina. Raha mampiasa milina maina loatra ianao, dia hipoitra ilay balaonina!
Asehoy ny fonon-tanana - Toy izany koa, azonao atao ny mametraka ranomamy maina ao anaty fonosana lava na plastika hafa ary afatory izany. Ny gripa maina dia hamafa ny fonon-tanana.
Ny lozam-pako dia mahafinaritra be ny milalao, fa tena mangatsiaka, ary misy loza hafa mifandray amin'izany. Alohan'ny hanandramana tetikasa misy ranomandry maina, aoka ho azo antoka fa fantatrao fa mety hitranga ny ranomandry . Manana fahafinaretana sy azo antoka!
Hitanisa ny ranomandry? Hetsiky
Mamono Bubble Recipe - Mitepoka blasts izay mitsambikimbikina
Ahoana no fomba hitazonana ny Jack-o'-Lanterna tsy hianjera
Chemistry Piranha Solution
Crystal Pinecone ornaments
Spooky Halloween Jack-o-Lantern
Ahoana no hanesorana ny teboka fanoratana ny teboka Ball Point
Ahoana no fanaovana savony
Poinsettia pH Papier
Ahoana ny fomba fanatanterahana ny fihetsiketseham-panoheram-pitaovana tritika azota
Ahoana no hampitomboan'ny kristiana ny fanovana ny loko?
Mianara momba ireo tebiteby ara-nofo ao amin'ny Cortex Cerebral
Italiana Open book 01.svg Matoanteny
Mpanafika ambony sy ny tanjon'izy ireo ao amin'ny Antoko Demokratika
Ny fahasamihafana eo amin'ny Liberaly sy ny konservativ
Nahoana ny toe-pahasalaman'i Puerto Rico no ao amin'ny hetsika filoham-pirenena Amerikana?
Fahatakarana ny saram-pifidianana an'i Scotland sy Grande-Bretagne
Fifanarahana mikasika ny zon'olombelona
Open book 01.svg Endrik'anarana
Tazomy ireo mpianatra amin'ny fitondran-tena tsara indrindra miaraka amin'ny toro-hevitra momba ny fitantanana kilasy fianarana
Iza moa i Yuri Gagarin?
Ny Snowboards mora indrindra
Famaritana ny endriky ny formulaire
Inona no atao hoe veganism?
Ny Buraku - "Untouchables" any Japana
25 Ireo olona izay nifangaro tamin'ny fiarahamoniny
Fomba fandrefesana ny haavony sy ny hamaroany - Tantaran'i Archimedes
Tatitra mahitsy momba Mesopotamia
Ny famoronana MDMA - Ecstasy
Md Marka Evanjelista: Mpanoratra Baiboly sy tompon-trano Saint
Picardo's Guernica Painting
Mamorona fifandraisana eo amin'ny tabilao amin'ny Microsoft Access 2010
Ny fomba fiasa Eklectika (na Eclectic Tournament) dia miasa ao amin'ny Gulf
Fandefasana horonan-tsary lehibe - Jumbotron
Doodle Symbolism - Arrows
Inona no atao hoe Copyright?
Manan-danja ve Andriamanitra?
Ny fofon-drivotra manjelatra